YHT Expeditions Kutanga neMatanho anotorwa paMay 28! Matikiti anotengwa neHEPP Chikumbiro | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraYHT Expeditions Kutanga neMatanho anotorwa paMay 28! Tickets achaiswa vakatengwa HEPP Application
23 / 05 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
Kutanga matikiti kuenda ku yht kuchatengwa ne hes application
Gurukota rezvekutakurwa nezvivakwa Adil Karaismailoğlu: Kutengesa kwezvitima zvekumhanya zvikuru kuchatanga pazuva repiri reRamadan. Nekudaro, matikiti ezvitima anogona kutengwa kubva parunhare rwekushandisa uye webhusaiti kana mataira pasina kubatana. Matikiti haasi kuzotengeswa kubva kunhare yekufonera uye vamiririri. Kutengesa matikiti kuchaitwa pamwe neHES (Hayat Eve Sığar) kodhi pamusoro sisitimu yeruzivo yedhipatimendi reHutano hwehutano kuti iongorore mamiriro evapfuura nezve COVID-19.
Gurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu, Adil Karaismailoğlu, akataura kuti nekutenda nekukurumidza kwechirwere ichi, maitiro ehupenyu achatanga, uye panguva ino maitiro ehutachifambisa achaitwa pamwe chete nematanho.
Gurukota raKaraismailoğlu akataura kuti masuo emiganhu nezvirambidzo zvakatemerwa mukati mekuyera kwerudzi rutsva rwematanho ekubuda kwezvibodzwa zvine hukama hwakawanda munharaunda uye panguva ino, Hurumende yakatora matanho akakosha ekurwisa hutachiona.
Tichisimbisa kuti danho rakakura rakaitwa mukurwisa hutachiona nekuda kwematanho anotorwa, gurukota Karaismailoğlu akatsigira kuti matanho akatorwa kumatunhu mazhinji kuitira kudzikisira miganho yehutem mumamiriro ehupfumi hwenyika uye kuti chirongwa chekurarama hupenyu huchatanga nekuda kwekudzikira kwechirwere chekumhanya; Panguva ino, akacherekedza kuti maitiro ekugadzirisa matanho ezvekutakura njanji achazotanga uye gadziriro yacho ichaitwa pamwe chete nezviyero.
"Matikiti anotengeswa aine makumi mashanu neshanu muzana mukana wakanangana nenzvimbo uye nzira yemuchinjiko nekusvetuka chigaro"
Minister Karaismailoğlu vakayeuchidza kuti mitsetse yemaguta akadai seMarmaray neBaşkentray haina kumisa nzendo muchiitiko ichi uye akawedzera kuti huwandu hwenzendo dzinowedzera zvishoma nezvishoma. Achitsanangura kuti vatanga gadziriro dzekufamba nzendo dzezvitima uye zvekumhanya-mhanya, Karaismailoğlu akati, "Kutengeswa kwematiketi ezvitima zvekumhanya zvikuru kuchatanga pazuva repiri reRamadan. Nekudaro, matikiti ezvitima anogona kutengwa kubva parunhare rwekushandisa uye webhusaiti kana mataira pasina kubatana. Matikiti haasi kuzotengeswa kubva kunhare yekufonera uye vamiririri. Kutengesa matikiti kuchaitwa pamwe neHES (Hayat Eve Sığar) kodhi pamusoro sisitimu yeruzivo yedhipatimendi reHutano hwehutano kuti iongorore mamiriro evapfuura nezve COVID-19. "Hapana matikiti achatengeswa kuvanhu vane hurema hwekufamba kana vasina kuwana kodhi yeHEPP." Minister Karaismailoğlu, avo vakati vachatanga ndege dzeYHT muna Chivabvu 28 nekuteerera mitemo yemagariro uye kuzviparadzanisa nevamwe, vakati nhanho dzichatorwa zvedanho renharaunda mukati mechitima kekutanga, uye kuti mutengesi wevatyairi vechitima anozotengeswawo nemakumi mashanu muzana pamatanho neyekutenderera nendege. Akadonhedza.
'' Yekumhanyisa Treni Kuchaita Mari Yegumi Nese Yekunze 'pazuva' '
Nekuda kwekurambidzwa kwechibvumirano nzendo dzinopesana nenjodzi yeCOVID-19, YHT yakavhiringidza ndege dzayo kunze kweMarmaray neBaşkentray kubva musi wa 28 Kurume 2020, ichidudzira kuti ndege dzeYHT chete kubva kumabasa makuru uye ematunhu echitima dzichavhurwa kubvira 28 Chivabvu 2020. Achaita rwendo dzese gumi neshanu pazuva pazuva paMazara-Istanbul, Ankara-Eskisehir, Ankara-Konya, Konya-Istanbul mitsara kubvira 28 ”. Gurukota raKaraismailoğlu akatiwo pachave nekuziviswa kazhinji nyevero yekuchengetedza chinhambwe munharaunda muzvitima.
"Kubvumirwa Kwekufamba uye HEPP Code Kuendesa Kunodiwa kune YHT Kufamba"
"Karaismailoğlu akatiwo zvigaro zvemashure zvengoro imwe neimwe muYHTs zvichachengeterwa vapfuuri vega vanhu vanofungidzirwa kuti vafamba nguva yekufambisa." Chitupa CheMvumo Yekufamba chakabvumidzwa nevatungamiriri vanofanirwa kumisikidza vanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu vari pasi pemakore makumi maviri vane nguva yekubva kumba. Kufamba kwevaya vasingakwanise kuendesa gwaro iri panguva yekutarisa kuchadzimwa uye mari dze tikiti haidzorerwe. Munguva iyi kubva pakusvika kwevapfuuri kuenda kuchitima kune chitima, vafambi vachazotariswa nevashandi vakafanira kuitira kuchengetedza chinhambwe. " Vachitaura kuti zvitima zvechitima zvicharamba zvichiratidzwa hutachiona isati yasvika uye mushure mekufamba rwendo, Karaismailoğlu akatiwo zvekutanga zvekushandisa zvevakatorwa pazvitima zvekumhanya zvakanyanya zvichave nemasiketi nemagurovhosi.
Zvirongo hazvigone kuwanika pamahofisi etikiti.
Urla Ferry Service 18 Inotanga muna May
Coronary hutachiona hwehutachiona huchave uri pasi pekuongororwa neHayat Eve Sığar Mobile application
Kesariya Kuchengetedza Magnetic Makitikiti Nezvokudarika Kare
Mitikiti yeTatu Airport
Konya Akaitwa Model Nematanho Izvo Zvinotora MuRuzhinji Yekutakura
YHT tiketi yekutengesa